प्रधानमन्‍त्री देउवाले रास्ट्रपति बाइडेनसँग ब्रेकफास्ट गरेपछि…. — Imandarmedia.com
प्रधानमन्‍त्री देउवाले रास्ट्रपति बाइडेनसँग ब्रेकफास्ट गरेपछि….
काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा बढ्दै गएको दाबी परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले गरेका छन्। नोभेम्बर महीनामा स्कटल्याण्डमा आयोजित विश्व जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुन पुगेका नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सिमित व्यक्तिमाझ आयोजना गरेको ब्रेकफास्टमा सहभागी गराएका थिए।
सय देशभन्दा बढी देश सहभागी सम्मेलनमा १२–१३ देशमात्रै सहभागी उक्त ब्रेकफास्टमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई सहभागी गराउनु देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको मन्त्री खड्काको भनाइ छ।
रुस-युक्रेन समस्याका कारण युक्रेनमा रहेका नेपालीहरू समस्यामा परे पनि उनीहरू अहिले सुरक्षित रहेको परराष्ट्रमन्त्री खड्काले बताए। पोल्याण्ड लगायतका देशमा ५ सय ३३ नेपाली सुरक्षित रहेको मन्त्री खड्काको दाबी छ।
युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण गराउन नेपालले अन्य मित्र देशलाई पनि आग्रह गरेको उनले बताए। संयुक्त राष्ट्र संघमा युक्रेनको पक्षमा नेपालले मतदान गरेर आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगिकार गरेको मन्त्री खड्काले बताए।
मानव अधिकार र देशको सार्वभौमित्ता असंलग्न राष्ट्रका महत्वपूर्ण पाटा हुन्,” मन्त्री खड्काले भने। नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेर कुनै गुटको पक्षमा नगएको जिकिर गरेका छन्।
नेपाल–चीनबीचको व्यापारमा समस्या देखिएको भन्दै समस्या समाधानका लागि चीनसँग वार्ताको पहल भएको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो। कोरोना महामारीपछि नेपाल–चीन नाकामा समस्या आएका कारण दुई देशबीचको व्यापारमा समस्या आएको छ।
चीनले नाका निर्वाद रुपमा सञ्चालन नगर्दा नेपालतर्फको व्यापारमा समस्या आएको छ।अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ताकब्जा गरेसँगै स्वदेश फर्किन हत्तारिएका नेपालीलाई स्वदेश फकाउन भूमिका खेल्यो।
नेपालले विदेशीलाई पनि सहयोग गर्छ भन्‍ने सन्देश दिदैं इतिहासमा नै पहिलो पटक वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा चार्टड विमानमार्फत नेपालले अफगानिस्तानमा मानवीय सहायता पठाएको पनि मन्त्री खड्काले बताए।
नेपाल दक्षिण एशिया सहयोग संगठनको अध्यक्षता गरेको देशको हैसियतमा पनि यही क्षेत्रको अफगानिस्तानमा मानवीय सहायता पठाउनु नैतिक दायित्व भएको मनन गर्दै सहयोग गरेको उनले बताए।
असोजमा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले पहिलो पटक पत्रकार सम्मलेन आयोजना गरेका हुन्। तेस्तै, युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण जारी रहेका बेला अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेका छन्।
रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण र युक्रेनको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डताबारे आफूहरूबीच कुराकानी भएको अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनीले ट्वीटरमा उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूबीच मंगलबार साँझ कुराकानी भएको हो।
ब्लिनकनले भनेका छन्रु-सले युक्रेनमा गरेको सैन्य आक्रमण र दुई देशले युक्रेनको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा गरेको समर्थनबारे छलफल भएको छ। हामी आर्थिक विकास र क्षेत्रीय चुनौतीको सामना गर्न मिलेर काम काम गर्नेछौं।
नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले भने यसबारे कुनै ‍औपचारिक टिप्पणी गरेको छैन। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको थियो।
नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित गरेको दुई दिनपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रीले प्रधानमन्त्री देउवासँग कुरा गरेका हुन्।